Maxay tahay Sababta Itoobiya Ruushka uga daba tagtay Soomaaliya
Loolanka Dhanka Siyaasada Iyo Ciidanka ee u dhaxeeya labadda Dowladood Iyo Shacab ee Soomaaliya Iyo Itoobiya waa mid soo jireen ahaa illaa qarnigii 16aad. Sooyaalka Taariikhdu wuxuu na barayaa in Itoobiya uu mar walba doonayso Dhulka Soomaaliyeed. Itoobiya waxay horrey u xalaalaysatay qaar ka mid ah Dhulkaas waana Dhulka Soomaali Galbeed (Ogaden).
Sannadihii 1964-1977 Waxaa dhacay Dagaallo u dhaxeeya labbada dhan midkaas oo Jamuuriyadii Kacaanka Soomaaliya ku doonaysay in guud ahaan 5 Soomaaliyeed la mideeyo. Araggtida noocaas ah waa mid aan wali ka dhamaan Shaqsiga Soomaaliga ah ee Caafimaadka qaba waana mid suurta gal ah marka aan eegno sida caalamku isu bad badali karro balse hadda ma muuqato waana mid ay dhaawaceen Siyaasiyiin u shaqeeya Dowladaha shisheeya gaar ahaan Itoobiya Iyo Kenya.
Cumar and Lav
PM Omar Somalia Iyo Wasiirka arrimaha Dibada Ruushka
Itoobiya marnba ma doonayso in Dalka Soomaaliya uu noqdo mid barwaaqo soorrsan ah, awood ciidan, Dhaqaale iyo Mid siyaasadeed uu adduunka ku yeesho waana sababta Maamul Gobaleedyadda Soomaaliya ay mar walba ku hantaan, waa mid lagu kala qaybiyo Hogaanka sarre ee Siyaasada Soomaaliya waa sababta mar walba aad u maqasho Addis Ababa hebel aaday ama u dhoofay.
Dhawaan waxaa tagay Dalka Ruushka RW Cumar Cabdi Rashiid wuxuuna Dalka ruuskha waydiisay in Militariga Dalka Soomaaliya dib loo dhiso tallaabadan waa mid carro galisay Dowlada Itoobiya waana mid sababtay in markiiba Wasiirka Arrimaha Dibada ee Itoobiya Tedrosh Adamon uu booqdo Moscow.
Illa lagu kalsoon yahay waxay sheegeen in Itoobiya Ruuskha ka dhaadhacisay in aan Soomaaliya ciidankeeda uusan Ruushku faragalin maadaamo ay doonayaan in Soomaaliya ay noqoto Dowlad aan lahayn Ciidan xooggaan sidaas daraadeedna Siyaasada Soomaaliya ay mar walba gacanta ku hayaan.
Xuquuqda Qoraalkan waxaa leh Soomaalipost.com